Chrome aad ayuu gaabis u yahay, sida dib loogu cusbooneysiiyo | War gadget
Qolka Ignatius | | Software, Tababarada
Dhammaan nidaamyada hawlgalka, midkoodna lama keydin, waqti kadib waxay ku dambeeyaan inay si qalad ah u shaqeeyaan, taas oo ay ugu wacan tahay rakibaadda iyo tirtirida codsiyada aan qabanno maalinba maalinta ka dambaysa, taas oo nagu kalifaysa waqti ka waqti inaan fulino rakibo nadiif ah oo laga soo bilaabo xoqida haddii aan dooneyno inuu kumbuyuutarkeenu u sii shaqeeyo sidii uu u bilaabay bilowgii . Hoos u dhaca waxqabadka wuxuu saameeyaa kombiyuutarada iyo aaladaha mobilada, sidaa awgeed had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid rakibid nadiif ah cusbooneysiin kasta oo OS ah
Laakiin maaha kaliya nidaamyada hawlgalka. Bog furayaasha, gaar ahaan kuwa noo ogolaanaya inaan ku darno kordhin si aan u habeeyno isticmaalkooda, sidoo kale waxay lumiyaan waxqabadka waqtiga, sababtoo ah kordhinta aan isticmaalno, ama sababtoo ah looma fiicneyn nooca ugu dambeeya ee biraawsarka, sababtoo ah tiradooda waa mid aad u badan ama maxaa yeelay biraawsarkayagu wuxuu u baahan yahay inuu nadiifiyo shayga. Chrome waa mid ka mid ah daalacashada ay saameynta ku yeelatay tirada ugu badan ee kordhinta ee ay na siiso, sidaas darteed haddii chrome uu gaabis yahayKadib waxaan ku tusineynaa sida dib loogu bilaabo si ay ugu shaqeyso sida maalinta koowaad.
1 Sababta sababta Chrome u gaabis yahay
2 Xalka ugu fudud
3 Maxaa ku lug leh dib u bilaabista Chrome
4 Waxa aan ku lug lahayn dib u bilaabista Chrome
5 Sida dib loogu bilaabo Chrome
Sababta sababta Chrome u gaabis yahay
Marka nidaamka hawlgalka uu bilaabo inuu muujiyo astaamaha daciifnimada, sababta marwalba waxaa laga helaa diiwaanka kumbuyuutarkeena, diiwaankaas waa wax laga beddelaa mar kasta oo aan codsi ku rakibno kombiyuutarkayaga, wax ka beddel lagama maarmaan u ah arjiga in lagu daro nidaamka. Laakiin codsiyada oo dhami ma aha inay isbeddelada si sax ah u sameeyaan mararka qaarkoodna, albaab ayaa laga tagayaa kaas oo korantadu ka soo gasho kooxdeenuna waxay bilaabaysaa qabow.
Wax la mid ah ayaa ku dhaca daalacashada iyo kordhinta. Kordhinta aan ku rakibeyno kumbuyuutarkeena, in kasta oo ay badankood ku jiraan Kaydka Chrome, dhammaantood dhammaantood si buuxda looguma habayn biraawsarka. Ficil-celin liidata waxay ku dhammaataa saameynta waxqabadka qalabkeenna, gaar ahaan marka tirada kordhinta lagu rakibo iyada oo aan fiicnayn.
Laguma talin buuxi biraawsarkayaga Chrome kordhinta, Maaddaama kaliya aan ka dhigno inay qaadato waqti dheer in la soo raro, laakiin howlaheeda ayaa gaabis ah. Had iyo jeer waa la doorbidaa in la isticmaalo 2 ama 3 kordhin oo aan ognahay inaan isticmaaleyno marka loo eego buuxinta baarka sare "hadiiba dhacdo", waa cadaalad in kiisaska badankood ay kaliya nagu keenayaan xanaaq.
Xalka ugu fudud
Haddii aan dooneyno inaan gooyno khasaaraheena oo aanan dooneynin inaan galno xulashooyinka qaabeynta ee Chrome si aan u aragno waxa aan taaban karno si aan uga dhigno inay u shaqeyso sidii bilowgii oo kale, xalka ugu dhaqsaha badan uguna dhib yar waa in laga saaro Chrome kombiyuutarkaaga oo dib u rakib. Tani waa xalka ugu adag laakiin daruuri maahan xalka ugu fiican, maadaama aan dooran karno inaan dib u bilawno adoo tirtiraya dhamaan kordhinta iyo walxaha qaabeynta kala duwan ee kujira nuqulkeena rakibay.
Maxaa ku lug leh dib u bilaabista Chrome
Dib u bilow Chrome, ama halkii soo kabso nidaamyada aasaasiga ah ee Google Chrome Waxay tusineysaa arrimo dhowr ah oo ay tahay inaan tixgalino haddii aan rabno inaan keydinno nooc ka mid ah qaabeynta gaarka ah ee noo oggolaaneysa, mar haddii biraawsarka dib loo howlgeliyo, si aan u heysano ikhtiyaarro la mid ah kuwii aan gacanta ku haynay ka hor intaan hawshan la fulinin Markaad dib ugu bilowdo Chrome goobaha aasaasiga ah, qiimayaasha asalka ah ee hoos ku faahfaahsan dib baa loo soo celin doonaa.
Qalabka raadinta tooska ah. Asal ahaan mashiinka raadinta asalka ah, iyo sababaha iska cad, waa Google. Haddii biraawsarkayaga uu afduubtay mashiin kale oo raadinta ah, markii dib loo dejinayo qaabeynta aasaasiga ah ee Google Chrome, mashiinka raadinta Google ayaa mar kale noqon doona midka caadiga ah.
Bogga ugu muhiimsan iyo tabs. Haddii markii aan furaynay biraawsarka aan diyaarinay boggayaga Facebook ama Twitter, markaan dib u bilawno, bogga guriga wuxuu ku laaban doonaa mashiinka raadinta, sidii markii aan markii ugu horreysay rakibnay biraawsarka.
Tabsyada aan horey u hagaajinay taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah ku galno boggaga internetka ee aan inta badan booqano anaga oo aan ku qorin baarka raadinta ama ku raadinayno calaamado.
Isku xidhka waxyaabaha ka kooban degellada aad booqato. Chrome wuxuu noo ogolaanayaa inaanu qaabeyno waxa rukhsadaha ah ee bogagga internetka ee aan booqanno ay leeyihiin, sida helitaanka makarafoonkayaga ama pop-up-ka faraxsan. Markaad soo celineyso Chrome, dhammaan macluumaadkaani waa lumayaan.
Kukiyada iyo xogta bogga. Dhammaan cookies-yada la keydiyay, trackers-yada iyo walxaha kale ee noo oggolaanaya inaan la falgalno websaydhada sida caadiga ah aan booqano gebi ahaanba waa laga saari doonaa biraawsarkayaga.
Kordhinta iyo mawduucyada. Dhammaan kordhinta aan ku rakibnay waa la jari doonaa laakiin lama baabi'in doono. Haddii aan dooneyno inaan mar kale dhaqaajino, waa inaan marin u helnaa Qaabdhismeedka> Kordhinta xulashooyinka.
Waxa aan ku lug lahayn dib u bilaabista Chrome
Haddii aan u isticmaalno biraawsarka Chrome koontadayada isticmaalaha, waxay u badan tahay, dhammaan calaamadaha, taariikhda raadinta, furayaasha sirta ah iyo kordhinta ayaa lagu keydiyaa koontadayada isticmaalaha, oo aanad saameyn ku yeelan hawlgalka biraawsarka, markaa markaad dib u bilawdo kumbuyuutarka, dhammaan xogtan ayaa sii socon doonta oo la heli karaa, marka laga reebo kordhinta, oo lagu sii wadi doono in la joojiyo si aan ugu hawlgelin karno mid mid markii hawsha dib u soo celinta ilaa qaabeynta ayaa dhameystirtay Google Chrome's default.
Sida dib loogu bilaabo Chrome
Haddii aan caddaynayno in ikhtiyaarka ah in laga saaro biraawsarka iyo dib-u-dhigistiisa aysan macquul ahayn, markaa waxaan ku tusaynaa dhammaan tallaabooyinka aad raaci karto sida dib loogu bilaabo chrome.
Marka ugu horeysa, markaan furno biraawsarka, waxaan aadeynaa saddexda qodob ee taagan oo ku yaal geeska midig ee kore ee biraawsarka, midig dhamaadka meesha ay ku fidsan yihiin dhammaan kordhinta aan ku rakibnay biraawsarkayaga. Markaad riixeyso, menu hoos-u-dhac ah ayaa ka muuqan doona meesha aan ku xulanno Qaabeynta
Marka xigta waxaan tagnaa salka shaashadda, halka ay ku taal marin u helka Dejinta horumarsan. Markaad gujineysid qaabeynta horumarsan, xulashooyinka qaabeynta cusub ayaa lasoo bandhigi doonaa oo kaliya waa inaan wax ka badalnaa hadii aan ognahay waxa aan sameyneyno. Waxaan aadeynaa dhamaadka boggaas oo waxaan gujineynaa dib u soo kabashada goobaha.
Chrome wuxuu na tusi doonaa daaqad xaqiijin ah taas oo nalagu ogeysiinayo howsha la qaban doono iyo waxa aan ku guuleysaneyno howsha, sida dib u dejinta bogga, mashiinka raadinta iyo tabsyada inta badan lagu daro si aad u curyaamiso kordhinta oo aad u tirtirto dhammaan cookies-ka iyo raad raacyada. Si aan ugu gudubno dib u bilaabashada Chrome kaliya waa inaan gujinnaa Dib u dejinta.
Marka xigta, biraawsarku wuxuu sii wadi doonaa inuu fuliyo dhammaan howlaha tilmaamaya soo celinta, xiri doono oo dib u furi doono si loo hubiyo inaad hawsha si sax ah u fulisay iyo, markaad gudubtay, si aad u hubiso sida xogta astaamaha, taariikhda iyo ereyada sirta ah wali loo heli karo in isla markiiba la isticmaalo.
Marka xigta, waa inaan tagnaa saddexda dhibcood ee ku yaal qaybta midig ee sare ee shaashadda si aan u helno xulashooyinka qaabeynta Chrome. Dhagsii qalab dheeri ah ka dibna Kordhinta, si aad u bilowdo awood u yeelo dhamaan kordhinta mid mid in aan la xiriirnay koontadayada.
Waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso howshan mid mid si aad u hubiso haddii kordhinta qaar ay sabab u aheyd inaan is aragno lagu qasbay inay dib u bilaabaan biraawsarkayaga Chrome. Haddii ay arintu sidan tahay, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah inaan gebi ahaanba ka tirtirno aaladdayada oo aan raadino bedel kale, taas oo xaqiiqdii ay jirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Chrome waa mid aad u gaabis ah, sida dib loogu bilaabo
Barnaamij cusub oo Steam Link ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ku ciyaartid ciyaaro moobilkaaga Android ama iPhone